Iza no mamaly ny fanadihadiana ataonao? Natao ho tsotra ny fanamarinana | Martech Zone
Ny fangatahana ny hevitry ny mpanjifa alohan'ny, mandritra, ary aorian'ny fandefasana orinasa vaovao dia fomba iray lehibe hahafantarana ny fandrefesanao ny mason'ny mpanjifanao. Tsy te-hieritreritra mihitsy ianao hoe fantatrao ny tsapan'ny lasibatra kendrenao (reny miasa hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 45 taona) momba ny zavatra ataonao, indrindra satria mora ny manontany azy ireo ny tenanao. Ny vaovao mahafaly ho an'ny mpivarotra, na miasa amina orinasa lehibe ianao na fanombohana kely, dia misy fitaovana maro azo ampiasaina hanampiana anao amin'ny asa fanatonana hanao fanadihadiana ny tsena kendrenao, na inona na inona tetibolao na haavonao. ny fahaizana.
Mandefasa an fanadihadiana an-tserasera raha te hahalala bebe kokoa momba ny mpanjifanao, ny fahatsapan'izy ireo momba ny vokatrao vaovao, ny zavatra tian'izy ireo ho hitanao avy any aoriana, ary ny karazana fandefasan-kafatra mety hisy vokany be indrindra amin'izy ireo. Azonao atao ny manara-maso mivantana ny mpanjifanao, na afaka mandeha amin'ny orinasan-tsolika antoko fahatelo ianao hividy ny hevitr'ireo olona hamaly anao. Ao amin'ny SurveyMonkey dia manolotra izahay Mpijery SurveyMonkey hampifandray anao amin'ireo mpanjifa sy mpiray antoka tianao ho tratrarina.
Fa ahoana kosa raha ny valim-panadihadiana nataonao, izay milaza fa Amerikanina Meksikana 35 taona izy izay miasa amin'ny sehatry ny fitsaboana ary manan-janaka 2, dia mekanika fotsy sy miasa ivelan'ny asa 18 taona antsoina hoe Frank? Ny fanapahan-kevitra raisinao amin'ny valin'ny fanadihadian'ny fahafaham-pon'ny mpanjifanao dia azo itokisana ihany raha ny fampahalalana azonao momba ireo olona manao fanadihadiana.
At SurveyMonkey, manana ekipa iray manontolo miasa izahay mba hahitana ny fomba tsara indrindra hanamarinana ny mombamomba ireo mpikarakara fanadihadiana. The Ekipa TrueSample miasa ao RealCheck Post ary RealCheck Social, vahaolana manamarina ny mombamomba ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana amin'ny alàlan'ny anarany sy ny adiresy ary ny adiresy mailaka. Ity fomba fiasa an-tanan-droa ity amin'ny fanamarinana ny valintenin'ny valin-teny dia natao hanamafisana ny mombamomba ireo na dia ireo manana valinteny sarotra aza, toy ny ankizy 18 ka hatramin'ny 24 taona (miala tsiny Frank).
Manana an'i Dr. Phil sy ny ekipany ao aminay koa izahay mpandinika metodista izay miasa hamantatra ireo manome fahafaham-po ireo pesky, olona izay haingana amin'ny famotopotorana anao nefa tsy manome azy ny fotoana sy fiheverana sahaza azy. Ny fomba fiasan'ny Dr. Phil dia miankina Inferansa Bayesian, fomba iray ahafantarana ireo tsy mpanara-dalàna lozika (mpamaly fantatra amin'ny maha-lehilahy azy, ohatra, ary avy eo amin'ny fanontaniana iray avy eo mamaly hoe "eny," raha ny marina dia bevohoka izy tao anatin'ny 3 taona lasa).
Ny fanamarinana ny mombamomba ireo mpandinika ny fanadihadiana dia samy zavakanto sy siansa, fa ny vaovao tsara dia tsy irery ianao amin'ny fikatsahanao ireo valinteny tsara indrindra sy azo antoka indrindra. Misy olona tena marani-tsaina izay manipy sy mihodina amin'ny alina, tsy mahita torimaso mieritreritra ny fomba tsara indrindra hanamarinana ireo olona navalinao anao. Tena matotra. Satria ny valiny fanadihadiana tsara kokoa sy voamarina dia valin'ny fanadihadiana azo antoka kokoa. Ny valin'ny fanadihadiana azo antoka kokoa dia midika fanapahan-kevitra tsara kokoa noho ireo valiny ireo. Ary ny fandraisana fanapahan-kevitra tsara kokoa dia mahatonga anao ho tsara tarehy, izay mahatonga anay hahatsapa ho tsara. Mandresy ny rehetra. Afa-tsy an'i Frank.
Tags: Paositra RealCheckRealCheck Socialmpandinika fanadihadianaSurveyMonkeyTrueSamplehanamafy
Mampiasà Pinterest handraisana mpampiasa sy hampiroborobo ny SEO
Febroary 19, 2016 amin'ny 12:37 PM